FAMONOANA VAZAHA TELO MIANAKA : Nafindra ao Toamasina ilay nahavanon-doza
Raha tsiahivina, dia ny 13 mey lasa teo no hita faty tao amin’ny trano fonenan’izy ireo tao Depot 4e Toamasina i Francisco Perez guadeloupéen sy ny vady aman-janany. Efa faty herinandro io hita io izay razana efa simba. 8 août 2019
Ny mpiambina ny tranon’izy ireo antsoina hoe Zaka avy hatrany no nandehanan’ny eritreritry ny mpitandro filaminana. Izy izay tsy hita popoka intsony tamin’ny fotoana nahitana ny razana. Nandeha ny fikarohana rehetra. Voasambotra ny zoma 2 aogositra tany amin’ny faritry ny Kaominina Masomeloka distrikan’i Mahanoro ny naman’i Zaka antsoina hoe Bary Jean. Ity farany izay niaraka nanao ny famonoana. Niitatra ny fanadihadiana, ny andron’ny zoma 2 aogositra io ihany, dia voasambotra tao Ambodibonara i Angela vadin’i Zaka. Ilay vadiny izay mpiray tsikombakomba tamin’ny famonoana ny fianakaviana Francisco Perez.
Tsy namelan’ny polisy misahana heloka bevava ao Toamasina raha tsy voasambotra i Zaka izay tena ati-doha. Ny alatsinainy lasa teo izy no tratra tao Ambodibonara Mahanoro. Ny harivan’ny talata 6 aogositra no tonga tao Toamasina.
Raha ny angom-baovao, dia haverina hatao indray ilay famerenana ny fomba famonoana tamin’ny fomba feno habibiana nataon’i Zaka sy Bary Jean ary Angela.
Ny alatsinainy 5 aogositra, dia efa nisy ny fanaovana io famerenana io saingy ho fenoina izany amin’izao fahatrarana an’i Zaka izao.
Ny loharanom-baovao no nahalalana fa ny masoivoho frantsay eto Madagasikara no mitaky ny fanaovana io « reconstitution » io noho i Francisco Perez mizaka ny zom-pirenena frantsay.